Yini ikhamera ye-IP?
Emhlabeni lapho amadivaysi kagesi eqala ubukhali, sibe nelukuluku ngezinto ezisiqhuba phambili. Kusukela i-Adsl Internet Conncn ...
Emhlabeni lapho amadivaysi kagesi eqala ubukhali, sibe nelukuluku ngezinto ezisiqhuba phambili. Njengoba ukuxhumeka kwe-inthanethi ye-AdvelS kushiywe ngemuva kokwenziwa okunzima kwe-Ethernet kanye nezinye izindlela ze-fiber, sikubonile ukwanda okuqinile kwemikhiqizo yevidiyo esivumela ukuba sikwazi ukuxhumana nabanye futhi sibuke izinto esizibambe. Lapho uphumile emakethe yekhamera entsha yewebhu, kungenzeka ukuthi ubonile eminye imikhiqizo efanayo eyaziwa ngokuthi amakhamera we-IP. Uma uzibuza ukuthi uyini lezo, ufike endaweni efanele!
Ngamafuphi, aIkhamera ye-IP (Ikhamera yevidiyo) ikuvumela ukuthi uhlole izinto futhi uqophe ama-footage ngezikhathi ezengeziwe. Kuyithuluzi okufanele ulisebenzise uma ufuna ukuvikela ikhaya lakho noma ibhizinisi. Inokwehluka okuningi okukhulu okubeka ngaphandle kwekhamera yewebhu, yingakho isidingo segama elisha. Ngenkathi ungenza imisebenzi eminingi yekhamera ye-IP kwikhamera yewebhu, ukuhlupheka kokwenza kanjalo - nokuntuleka kwekhwalithi oyithola esithombeni - kwenza i-webcam ingaphansi kokuhle.
Khumbula ukuthi lokhu akuyona ukuqhathanisa ukusebenza. Amakhamera we-web kanye namakhamera we-IP kwenziwa ukumane asebenze imisebenzi ehlukene.Lawo ungumehluko oyinhloko phakathi kwalokhu okubili:
Lindela isilinganiso esingcono sohlaka olungcono ngamakhamera we-IP. Zenziwa ukuthi zithwebule yonke inhlangano eyodwa ngenkathi zinciphisa ama-blurs ezingadala ukuthi inkantolo ethile ibuze noma imaphi amavidiyo ongawasebenzisa njengobufakazi.
Amakhamera we-IP agxile kakhulu ekuhluphisweni, okusho ukuthi bazohlala behlala isikhathi eside ezimeni zangaphandle. Abanye banesitifiketi samanzi se-IP67 materproof, okusho ukuthi babufakazi bothuli kanye namanzi.
Amakhamera amaningi we-IP awanantambo, kanti iningi lama-webcams liyaphindwa. Lokhu kubavumela ukuthi bafakwe ezindaweni ezingenayo amakhompyutha aseduze. Ubude bekhebula akufanele kube yinkinga. Amakhamera wenethiwekhi ye-IP angasakaza ividiyo eya kwabamukelayo abaningi. Ungalawula futhi amakhamera amaningi kwikhompyutha eyodwa.
Amakhamera we-IP anezici ezithuthukile njengokukhanya okuphansi nokukhanya ebusuku. Lokhu kuvumelaUmbono wobusukuuhla oludeukugada. Ama-webcams ancike kakhulu ekukhanyiseni kwamakamelo esithombeni.
Kusasa sizokwethula ezinye izindlela mayelana nokuthi ungayikhetha kanjani ikhamera ye-IP. Ngakho-ke uma unezintshisakalo kuwo, bese ungithola kusasa.
PHAMBI Izinto okufanele uzibheke uma uthenga amakhamera we-IP
Ikhamera yomzimba iza! OLANDELAYO